Coronavirus: Muxuu shiinaha u mamnuuci waayay xayawaankan ay isticmaalaan dadka dhibka ku qaba dhalmada? - BBC News Somali
Coronavirus: Muxuu shiinaha u mamnuuci waayay xayawaankan ay isticmaalaan dadka dhibka ku qaba dhalmada?
Xigashada Sawirka, EIA
Ururada u dooda xuquuqda xayawaanka ayaa sheegay in go'aanka ay dowladda Shiinaha ku mamnuucday ganacsiga hilibka xayawaannada duur joogta ah uusan sii socon doonin muddo dheer, maadaama wali dalkaas laga oggol yahay ganacsiga qalabka laga sameeyo hilibka iyo maqaarka xayawaanka, sida dawooyinka, dharka iyo waxyaabo kaleba.
Go'aanka mamnuucista ah ayaa lagu dhawaaqay bishii February kaddib markii laga shakiyay in hilibka xayawaanka ee lagu iibiyo suuqa magaalada Wuhan uu sababay xanuunka hadda dunida sida weyn ugu faafaya ee coronavirus.
Waxaa walaac laga muujinayaa in oggolaanshaha waxyaabaha laga sameeyo maqaarka iyo hilibka xayawaanka ay micnaheeda tahay in wali ganacsiga la mamnuucay uu kasii socon karo suuqyada madow ama qarsoodiga ah.
Aaminaadda dawo dhaqameedka
Xayawaannada sida weyn loo ilaaliyo ee Pangolin(oo ah xayawaan qolfo ku leh jirka oo af-dhuuban) iyo Haramcadka ayaa la fasaxay in laga ganacsado, sababtoo ah qeybo ka mid ah jirkooda waxaa laga sameeyaa dawo dhaqameedyo laga isticmaalo Shiinaha.
"Inkastoo aan seynis ahaan loo caddeynin faa'iidada ku jirta dawooyin badan oo laga sameeyo xayawaanada, kalsoonida lagu qabo dawooyinkaas waa mid aad u xoog badan," ayuu yiri Terry Townshend oo ah nin u dooda xuquuqda xayawaanka oo fadhigiisu yahay Shiinaha islamarkaana aasaasay shirkadda Birding Beijing.
"Tusaale ahaan, waxaan aqaannaa qoys aqoonyahanno ah, oo labo carruur ah leh, midkood uu dhibaato ka qabo xagga dhalmada kan kalena uu ka howlgalo ururrada ilaaliya xuquuqda xayawaanka.
Coronavirus: "Cudur danba kama lihin ee dhibaato ka wayn baa na haysato"
Xigashada Sawirka, Hope/Jenny Tang
"Isagoo aad u og in aan caddeyn seynis ah loo heynin, walaalka dhalmada dhibaatada ka qaba wuxuu isticmaalay xayawaanka pangolin, kaddib markii uu wax walba oo kale isku dayay"
Xayawaanka pangolin-ka ayaa qarka u saaran inuu ka dabar go'o Shiinaha, sababtoo ah waxaa aad u badan dalabka lagu raadinayo, waaxana xayawaanka loogu safrinta badan yahay guud ahaan caalamka.
Cilmi baaris la sameeyay ayaa lagu ogaaday in xayawaanka Pangolin-ka uu jirkiisa ku qaadi karo fayrasyo aad ugu dhow kuwa sababa cudurka Covid-19.
Dasaaraddan oo lagu daabacay wargeyska Nature ayaa sidoo kale lagu caddeeyay in aan wali la xaqiijinin doorka uu xayawaankan ku leeyahay cudurka safmarka ah ee hadda socda.
Xigashada Sawirka, ActAsia
Go'aanka cusub ee lagu mamnuucay ganacsiga hilibka iyo maqaarka xayawaanka duurjoogta ah ayaa laga reebay waxyaabaha qaar.
Tusaale ahaan, waa sharci darro in la iibiyo ama la iibsado hilibka xayawaanka Pangolin-ka, laakiin waxaa la fasaxay in la isticmaalo ciddiyihiisa oo laga sameeyo waxyaabaha guryaha lagu qurxiyo iyo sidoo kale qoloftiisa oo laga sameeyo dawooyin dhaqameedka.
Xayawananada kale ee la fasaxay waxa aka mid ah shabeelka weyn, Oorsada iyo Jabisada. Shiinaha ayaa sidoo kale laga isticmaalaa yaxaasyada iyo xayawaanno kale.
Cunistahilibka duur joogta
Ra'yi aruurin dhawaan la sameeyay ayaa lagu muujiyay in muwaadiniinta Shiinaha badankood ay kasoo horjeedaan cunitaanka hilibka xayawaanka aan asal ahaan kasoo jeedin waddankooda.
Dadka fikradaha laga aruuriyay oo ka badan 101,000, waxay 97% ka mid ah diideen sii socoshada wax soo saarka laga sameeyo xayawanaka, intooda badanna waxay taageereen go'aanka ay dowladda ku mamnuucday ka ganacsigooda.
Sababta ugu weyn ee ay bixiyeen waa saameynta ka dhalan karta xayawaanadaas.
Xigashada Sawirka, Weibo
Ra'yi aruurintan oo ay si wadajir ah u sameeyeen jaamacadda Peking iyo toddoba urur oo kale, waxaa laga yaabaa inaysan ka turjumin rabitaanka guud ee shacabka Shiinaha.
Waxaa dadka fikradaha looga aruurinayay dhinaca online-ka iyo baraha bulshada.
Maxay aaminsan yihiin dhalinyarada?
Dadka da'da yar ee Shiineyska ah, kuwooda la hadlay BBC-da waxay taageereen natiijada kasoo baxday ra'yi aruurintaas.
"Waxay ila tahay inaan si buuxda u raacsan nahay in laga takhaluso suuqyada lagu iibiyo hilibka iyo wax soo saarka xayawaanada,2 ayey tiri Ji[oo codsatay inaan la adeegsanin magaceeda oo dhammeystiran], waana ardayad sanadkii ugu dmabeeyay uga jirta jaamacadda Beijing.
"Raashinka aan maalinlaha cunno kuma jiro hilibka xayawaannada," ayey hadalkeeda sii raacisay gabadhan 21 jirka ah.
Mamnuucistan ma shaqeyn doontaa?
Dowladda Shiinaha waxay mamnuucis tan la mid ah soo saartay sanadkii 2003-dii, markaasoo uu dalkaas ka dillaacay cudurka SARS, laakiin waxay go'aankaas ka noqotay dhowr bilood kaddib.
Markanna, dadka u dooda xuquuqda xayawaanka qaarkood waxay sheegayaan in xaaladdu ay ka duwan tahay sidii hore, rajo fiicanna ay jirto.
"Tan iyo markii uu soo if baxay cudurka Covid-19, dowladda Shiinaha waxay baaritaan ku sameysay in ka badan 600 oo kiis oo ah dambiyada la xiriira xayawaanka duurjoogta ah, waxaana rajeyneynaa in tallaabadan ay ka awood badan tahay tii hore," ayuu yiri Yuhan Li, oo ka mid ah dadka u ol'oleeya xuquuqda duur joogta.